Akụkọ - Ọgwụgwọ mmiri na-adịghị mma: azịza nwere ezi uche
Tekinoloji Okwu Mmalite
Ofkpụrụ FMBR Technology
Ihe ngosi FMBR na onyinye
WWTP nke agbasaghị
WWTP dị mma dị mma (Osimiri & Mmiri Mmiri)
Gbanwee WWTP nke oma
Ọgwụgwọ mmiri na-adịghị mma: Ngwọta nwere ọgụgụ isi
Nlekọta mmiri na-enweghị mmiri na-agụnye ọtụtụ ụzọ maka nchịkọta, ọgwụgwọ, na mgbasa / iji mmiri mee ihe maka ebe obibi ọ bụla, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ụyọkọ nke ụlọ ma ọ bụ azụmahịa, na obodo niile. A na-eme nyocha nke ọnọdụ akọwapụtara saịtị iji chọpụta ụdị usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ọ bụla. Usoro ndị a bụ akụkụ nke akụrụngwa na-adịgide adịgide ma nwee ike ijikwa ya dị ka ụlọ ọrụ ndị kwụụrụ onwe ha ma ọ bụ jikọta ya na sistemụ mmiri nsị. Ha na-enye usoro ọgwụgwọ dị iche iche site na ọgwụgwọ dị mfe, na-agafe agafe na mgbasa ala, nke a na-akpọkarị septic ma ọ bụ sistemụ onsite, na ụzọ dị mgbagwoju anya na nhazi dị ka ngalaba ọgwụgwọ dị elu nke na-anakọta ma na-emeso ihe mkpofu site n'ọtụtụ ụlọ ma na-agbapụta na mmiri dị n'elu. ma ọ bụ ala. A na-etinyekarị ha na ma ọ bụ n'akụkụ nso ebe a na-eme mmiri mmiri. Sistemụ ndị na-agbapụta n'elu (mmiri ma ọ bụ ala ala) chọrọ ikike Mwepu Mwepu Ọpụpụ Mba (NPDES).
Usoro ndị a nwere ike:
• Na-eje ozi n'ọtụtụ akpịrịkpa gụnyere ebe obibi, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ obere obodo;
• Na-emeso mmiri mmiri ka ọ dị mma na nchekwa nke ahụike ọha na ogo mmiri;
• Na-erubere koodu obodo na nke steeti; na
• Na-arụ ọrụ nke ọma n'ime ime obodo, ime obodo na obodo.
N'IHI gịnị ka e ji mara ọgwụgwọ mkpofu ahihia?
Nlebara anya na mmiri mkpofu nwere ike ịbụ ụzọ dị mma maka ndị obodo na-atụle usoro ọhụụ ma ọ bụ gbanwee, dochie, ma ọ bụ ịgbasa usoro ọgwụgwọ mmiri mmiri dị ugbu a. Maka ọtụtụ obodo, usoro ọgwụgwọ enweghị isi nwere ike ịbụ:
• Na-eri ego ma na-akwụ ụgwọ
• Izere nnukwu ego ga-efu
• Mbenata ọrụ na mmezi-akwụ ụgwọ
• Promkwalite azụmahịa na ohere ọrụ
• Green na-adigide
• Na-erite uru na mmiri dị mma
• Iji ike na ala eme ihe n'ụzọ amamihe
• Nzaghachi maka uto mgbe ị na-echekwa oghere dị ndụ
• Nchekwa na ichedo gburugburu ebe obibi, ahụike ọha na eze, na ogo mmiri
• Ikpuchido ahụike obodo
• Redbelata mmetọ ndị na-emetọ emetọ, nri na ihe ndị nwere nsogbu
• Na-egbochi mmetọ na ihe ize ndụ ahụike metụtara mmiri mmiri
LLỌ NT BKWU
Ebe a na - ekechapu mmiri mkpocha mmiri nwere ike bụrụ ihe ga - eme ezi uche dị na ya maka obodo ọ bụla nha na igwe mmadụ. Dị ka usoro ọ bụla ọzọ, a ga-ahazi usoro dị iche iche n'ụzọ kwesịrị ekwesị, debe ya ma rụọ ọrụ iji nye uru dị mma. Ebe ha kpebisiri ike ịbụ ndị dabara adaba, usoro a na-achịkọtaghị ọnụ na-enyere obodo aka iru ala atọ nke nkwado: ọ dị mma maka gburugburu ebe obibi, ọ dị mma maka akụ na ụba, na ọ dị mma maka ndị mmadụ.
Ebe ọ na-arụ ọrụ
Obodo Loudoun, VA
Mmiri Loudoun, na Loudoun County, Virginia (mpaghara Washington, DC), ejirila usoro jikọrọ aka na njikwa mmiri mkpofu gụnyere ikike a zụrụ site na osisi etiti, ebe nchekwa mmiri satịlaịtị, yana ọtụtụ usoro ụyọkọ ụyọkọ obodo. Approachzọ ahụ ekwela ka ógbè ahụ nwee ike ịnọgide na-enwe àgwà ime obodo ya ma kee usoro nke uto na-akwụ ụgwọ maka uto. Ndị na-emepe emepe na-arụpụta ma na-arụ ụyọkọ mmiri mkpofu ụyọkọ na ụkpụrụ mmiri nke Loudoun na ego nke aka ha ma nyefee ikike nke usoro a na Loudoun Water maka ịnọgide na-arụzi. Usoro ihe omume ahụ na-akwụ ụgwọ onwe ya site na ọnụego na-ekpuchi mmefu. Maka ozi ọzọ:http://www.loudounwater.org/
Obodo Rutherford, TN
Consolidated Utility District (CUD) nke Rutherford County, Tennessee, na-enye ọtụtụ ndị ahịa ya ọpụpụ ọrụ nsị site na usoro ọhụụ. A na-akpọ usoro a dị ka sistem na-agbapụta mmiri na-ekpo ọkụ (STEP) nke nwere ihe dị ka sistemụ mmiri mmiri 50, nke ha niile nwere usoro STEP, nzacha nzacha na-agagharị, na nnukwu mgbasa mmiri na-asọpụta. Ọ bụ ndị Rutherford County CUD nwe ma jikwa ya niile. Usoro ahụ na-enye ohere maka mmepe njupụta dị elu (subdivisions) na mpaghara nke mpaghara ebe mmiri nsị obodo na-adịghị ma ọ bụ ụdị ala adịghị enye aka na tankị mmiri nsị na ahịhịa. A na-eji tankị mmiri nwere galọn 1,500 nwere pampu na ogwe njikwa dị na ụlọ ọ bụla maka ịmịpụ mmiri mkpofu na sistemụ mkpokọta mkpofu. Maka ozi ndị ọzọ: http://www.cudrc.com/Departments/Waste-Water.aspx
Jụọ ihe ngwọta nke mmiri mmiri
Kpọọ Anyị+1 9703088442
Adreesị244 Fifth Avenue, Suite Q222 New York, NY 10001